माछापुच्छ्रेको विच्याट वालेट भुक्तानी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — माछापुच्छ्रे बैंकले विच्याट वालेट भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले शुक्रबारदेखि पहिलोपटक विच्याटबाट भुुक्तानी सेवा थालेको हो ।
बैंकले नेपालमा आउने चिनियाँ पर्यटकलाई लक्ष्य गर्दै विच्याट वालेटबाट हुने भुक्तानी सुरु गरेको जनाएको छ । यो सेवापछि विच्याटबाट बैंकसँग आबद्ध मर्चेन्टबाट वस्तु खरिद गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम क्युआर कोड स्क्यान गरी तिर्न सक्छन् ।
बैंकले प्रस्ट पे टेक्नोलोजी प्रालिसँगको सहकार्यमा विच्याट सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७७ ११:०५
श्रावण ३२, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — समय थियो, र्‍याप भन्नेबित्तिकै छाडा गीत भन्ने बुझ्थे अधिकांश नेपाली श्रोता–दर्शक । तर, समयसँगै र्‍यापप्रतिको दृष्टिकोण बदलिएको देखिन्छ । मनोरञ्जन र मायाप्रेमका र्‍याप हुँदै पछिल्लो समय सामाजिक मुद्दामा हिपअप संगीत अगाडि बढेको छ । देशप्रतिको चिन्ता मिसिन थालेको छ । सामाजिक, राजनैतिक बेथितिका विषय समेटिन थालेका छन् ।
दुई साताअघि ‘मिस्टर डी’ का नामले चर्चित र्‍यापर सन्दिप विष्टले समसामयिक विषयमा गीत ल्याए, ‘कल्ले भन्यो तँलाई’ । सामाजिक मुद्दामा र्‍याप गाउँदै आएका उनले यस गीतमा पनि सामाजिक राजनैतिक विषयलाई छोएका छन् ।
निर्मला हत्या, भ्रष्टाचार, सीमा अतिक्रमण र विकासको नाममा हुने अयिमतिताको धन्धाजस्ता विषय उनको यो गीतमा समेटिएको छ । बलात्कार र एसिड प्रहारदेखि कलाकारलाई हिरासतमा हाल्ने विसंगतिका सवालमा गीतमार्फत उनले आवाज उठाएका छन् । उनको गीतमा यी पंक्ति सशक्त छन् –
चार मिनेट लामो भिडियोमा उनले देशको समस्याहरू उजागर गरेका छन् । उपचारका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिमाथि उनको गीतमा व्यंग्य भेटिन्छ । कमजोर कानुन, सुनकाण्डलगायतका विषय उठाएका उनले गीतमार्फत आम जनताको पीडा, आक्रोश र चिन्ता देखाएका छन् ।
एक महिनाअघि मात्रै र्‍यापर युनिक पोयट (उत्साह जोशी) ले ‘मेरो देश बिरामी’ बोलको गीत सार्वजनिक गरे । उनको गीतमा पनि देशप्रतिको चिन्ता झल्किन्छ । बलात्कार, भ्रष्टाचार, अत्याचारले देश बिरामी भए पनि भोलि देश ठीक हुने आशा उनको गीतमा पाइन्छ । ‘मेरो देश बिरामी, तर पार्नेछौं यल्लाई ठीक एक दिन हामी’ गीतको यो अंशमा पनि आशा छ । कलामाथिको हस्तक्षेपलाई लिएर आक्रोश भेटिन्छ उनका र्‍यापमा । ‘मैले गर्ने कलामा कलंकको छाप, हिपअप माने समाजको ऐना, बलात्कारलाई रोक हाम्रो आवाजलाई होइन,’ उनको गीतमा उक्त आक्रोश प्रस्टै सुनिन्छ ।
युनिकको गीतमा मात्र होइन । पछिल्लो समय र्‍यापर बालेन शाहले पनि देशको समस्याहरू उजागर गर्दै नयाँ गीत सार्वजनिक गरे । सात महिनाअगाडि युट्युबमा सार्वजनिक गरेको ‘बलिदान’ बोलको गीतमा पनि उनले देशको जनताको पीडा र दुःख समावेश गरेका छन् । अहिलेको वास्तविक समाज झल्किन्छ उनको गीतमा ।
हिपअपलाई समाजको ऐना भनिन्छ । ‘समाजमा के भइरहेको छ, त्यस कुरालाई हिपअपले देखाउन सक्छ । अनि भन्न खोजेको कुरा भन्न मिल्ने समयमा हामीले देशको कुरा किन नगर्ने ? त्यही गीत ल्याएँ,’ बालेन सुनाउँछन् । सामाजिक मुद्दामा र्‍याप गाउन उनी पनि सक्रिय छन् । उनको पछिल्लो गीतको शीर्षक ‘बलिदान’ हो । तुलसी घिमिरेले निर्देशन गरेको ‘बलिदान’ को समयलाई कल्पिदै उनी यो समय आवाज उठाउन रोकटोक नभएको बताउँछन् । ‘बलिदान फिल्मको समयमा कलाकारहरूले देशको राजनीतिक व्यवस्थाबारे बोल्न खोज्दा सरकारले केही गर्न दिँदैनथ्यो । तर अहिलेको समयमा हामी बोल्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले दुःख दिन सक्छ । तर पनि हामी त लोकतन्त्रमा छौं । बोल्न पाउने स्वतन्त्रता छ । यस्तो अवसर मिलेको बेलामा हामीले किन नबोल्ने ?’
देशप्रति चासो बढी भएर आफ्नो गीतमा देशका समस्या निस्कने ‘मिस्टर डी’ बताउँछन् । ‘देशमा फ्रस्टेसन छ जहाँ पनि । त्यही कुराहरूले पेलेको भएर लेखेको हो । यस्ता कुरा झेलिरहेकै भएर होला दर्शकले मन पराइदिनुभयो,’ उनले भने, ‘यम बुद्धले गर्दा पनि होला आजकल प्रेमिकाको विषयमा भन्दा पनि देशको विषयमा लेख्न मन लाग्छ । मानिसको सोच परिवर्तन होस् भनेर यस्तो गरेको हो ।’ संगीतका अन्य विधाले यस्तो विषयलाई कमै समावेश गर्ने बालेनको तर्क छ । त्यसैले उनी भन्छन्, ‘हामी यस्तो विषयमा आवाज उठाउँछौं किनभने अरू संगीतका विधाले पनि सिकोस् ।’
यसरी आवाज उठाउँदा सम्बन्धित निकायसामु दबाब सिर्जना हुने उनी बताउँछन् । यस किसिमको गीतमार्फत युवाले पनि समाजको वर्तमान स्थितिसँग परिचित हुन पाउँछन् । यो गीत एक दिनमै लेखेका हुन् । चर्चित र्‍यापर भिटेनलाई हिरासतमा राखेर छाडेपछि उनलाई यो विषयमाथि गीत लेख्ने मन भएको हो । अभद्रता आरोपमा भिटेनलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले पछि दबाब पर्दा छाडेको थियो । ‘त्यस विषयमाथि बोल्नै पर्छ भन्ने भान भएपछि आफूले यस विषयमा गीत लेखें,’ उनले भने, ‘यसको मतलब हामी चुप बस्दैनौं । झन् बोल्छौं अब । हामीले नै बोलिरहेका छौं हामीलाई नै पेल्ने ? त्यही भएर हिपअप समुदायमा जागरुक भयो । हामीले के देखाउन खोजेका भने एक जनालाई सरकारले समात्दा १० जनाले त्यस्तो गीत बनाउँछ ।’
भिटेनको विषय उठ्नासाथ मिस्टर डीले भने ‘भिटेनलाई समाउन जरुरी थिएन । तर शक्तिको प्रयोगमा समातियो । त्यो शक्ति कलाकार समात्नमा भन्दा पनि सकारात्मक कुरा प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिलेसम्म निर्मला हत्याकाण्डको अपराधी समातिएको छैन । त्यस्तो कुरामा ध्यान दिइयोस्, कलाकारको पछाडि दौडिने होइन वास्तविक अपराधी समात्न दौडिओस् भनेर त्यो विषय गीतमा जोडें ।’ यस्तो गीतलाई दर्शकले अन्य गीतलाई झैं मन पराउँदैनन् भन्ने थाहा थियो बालेनलाई । तर उनको गीतलाई ९ लाख बढीले हेरेका छन् युट्युबमा । उनी भन्छन्, ‘यस्तो गीतमा १ लाख भ्युज आउन गाह्रो पर्छ । तर दर्शकले मनपराइदिनुभयो । यसको मतलब हामीले युवामा जुन बीउ रोपेका थियौं त्यो बढिसक्यो । अब युवाले पनि बुझिसके ।’
देशको अवस्था नसुध्रिएको देखेर होला पेसागत हिसाबले स्ट्रक्चरल इन्जिनियरसमेत रहेका बालेन काठमाडौं महानगरको चुनाव लड्ने इच्छा राख्छन् । हुन त यस्तो गीतमा कम भ्युज आउँछ भन्ने थाहा थियो मिस्टर डीलाई पनि । तर यस्तो गीतले युवालाई जोस दिने भएकाले पनि आफूले यस विषयमा र्‍याप गाएको उनी बताउँछन् । ‘यो गीतहरू एकपटक सुनेपछि दोहोर्‍याएर सुन्न मन लाग्दैन । लभ सङहरू त दिनमा तीन पटक ब्रेकअप परेपछि त सुन्न मन लागिहाल्छ नि । त्यही भएर यस्तो गीतमा भ्युज कम जान्छ,’ उनले सुनाए, ‘तर यसले मानिसलाई केही क्षणका लागि पनि जोस दिन्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रो देशको स्थिति के छ भनेर सोच्न बाध्य गराउँछ ।’
उनले यसअघि लकडाउनमा घरमै थुनिएर बसेका दर्शकलाई आशा जगाउने किसिमको गीत बनाएका थिए । लकडाउनबीचको समस्यासँगै छुवाछुतका विषयमा पनि र्‍यापमार्फत आवाज उठाए । उनी आफ्नो गीतमा देशको समस्या समेट्न रुचाउँछन् । ‘मलाई मेरो गीतमा सबै समस्या समेट्न मन लाग्छ । सबै पीडा समेटियोस् । देश राम्रो भइहाले पछिका पुस्ताका लागि यो दस्तावेजका रूपमा रहोस् भनेर समस्या समावेश गर्छु,’ उनले भने ।
र्‍यापर गिरीश खतिवडाले पनि सामाजिक मुद्दामा र्‍याप गाउँछन् । उनले पछिल्लो समय ‘बालुवाटार घेर, सिंहदरबार’ बोलको गीत ल्याएका थिए । त्यस्तै पछिल्लो समय सुरज क्षेत्री (भ्योमा) र दीपक कहार (डी–१) ले पनि फरक विषयमा र्‍याप गीत ल्याए– ‘ढाका धोती’ । पहाडिया र मधेसीबीचको भेदवाद अन्त्य गर्न हिपअप संगीतको प्रयोग गरेको सुरज बताउँछन् । ‘मधेसलाई हेर्ने नजर पनि परिवर्तन होस् र पहाडी र मधेसबीच विभेद नहोस् भनेर गीत गरें,’ उनले सुनाए, ‘आजको दिनमा पनि मधेस बेल्टको मानिसलाई होच्याउने गर्छ । मधेसमा एउटा पहाडिया गयो भने त्यस्तो व्यवहार हुन्छ । मधेस र पहाडीबीच भएको गलत सोचहरूको अन्त्य गर्ने सोचले गीत गर्‍यौं ।’
मधेसले पनि हिपअप सुन्ने गरेको देखाउन पनि नयाँ अभ्यास गरेको सुरज बताउँछन् । ‘यो गीत सुन्नुपर्छ । मधेसमा हिपअप चल्दैन भन्ने कुरा धेरै छ । त्यो कुराहरू हटाउन पनि हामीले गीत ल्याएका हौं । प्रमुख भनेको चाहिँ हिपअपबाट पनि हामीले मधेसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हो,’ गीतको प्रसंग जोड्दै भने, ‘हिपअप भनेको त समाजको प्रतिबिम्ब हो । त्यसैले समाजमा जस्तो चलिरहेको छ । जुन कुरा हामीले देखिरहेका थियौं । त्यही विषयमा समान्य तरिकाले गीत बनायौं ।’
प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७७ १०:५७